Jinfuya ntecha na-ji nganga tọrọ ntọala na-eto eto na City of Angels. Ọ bụ akara ngosi mara mma ma na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịnye gị ihe ịchọ mma kachasị mma na anụmanụ. Anyị na-eche banyere ịba uru na ịgụnye ya, ma gbaa obodo anyị mara mma chọrọ ka ọ makụọ ma gbalịa etemeete. Anyị ...
Onyinye anya bụ ihe ịchọ mma nke etinyere na nku anya na n'okpuru nku anya. A na-ejikarị ya eme ka anya onye nwe ya pụọ ​​ma ọ bụ mara mma. Onyinyo anya na-agbakwụnye omimi na akụkụ na anya mmadụ, na-agbakwunye ụcha anya, ma ọ bụ na-adọrọ uche gaa na anya. Anya sh ...
Kedu otu esi ahọrọ ntọala mmiri kachasị mma?
Ntọala mmiri mmiri anyị kacha ere ugbu a na 40 shades! Mpempe akwụkwọ dị fechaa, nke enweghị mmanụ na-agwakọta nke ọma na anụ maka ọmarịcha ọkara matte mara mma nke na-adị ogologo ụbọchị niile. Usoro mmiri mmiri na-enyere aka weghachite anụ adịghị ahụkebe anụ ahụ na ụda maka anụ ahụ na-acha anya. Zuru okè maka ụdị anụ ahụ niile na t ...
N'ihe banyere etemeete, ịkpụcha ihu gị kwesịrị ịbụ usoro azụmaahịa gị izizi tupu ị gaba n'ihu egbugbere ọnụ gị na etemeete anya gị. Mana ihe nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ichoro ihe eji acho ihe? Onye na-ezo ihe na-abịa tupu ma ọ bụ mgbe ntọala? Anyi no ebe a ka anyi wepu ihe anyi na s ...